🥇 ▷ Barnaamijka 'Edge Bounty' ee cusub ee Microsoft wuxuu siiyaa abaalmarin la siiyo baarayaasha amniga ✅
Barnaamijka ‘Edge Bounty’ ee cusub ee Microsoft wuxuu siiyaa abaalmarin la siiyo baarayaasha amniga
Maalmo uun ka dib markii la bilaabay barnaamijka beta beta ee ugu horreeya ee guud ee ‘Edge browser’ waxaa la isticmaalay Chromium, Microsoft ayaa ku dhawaaqday furitaanka Barnaamijka Abaalmarinta Microsoft Edge Insider oo leh abaalmarin gaareysa ilaa $ 30,000 oo loogu talagalay baarayaasha baaraha internetka oo ka heli kara nugulida kanaalka barnaamijyada software ee Dev iyo Beta.
Daabacaad rasmi ah, shirkadda waxay tiri: “Ujeedada barnaamijka Microsoft Edge Bounty Insider Program (oo ku saleysan Chromium) waa in la helo nuglaanta u gaarka ah Microsoft Edge ee soo socda taas oo saameyn toos ah oo muuqata ku leh amniga macaamiisheena”.
Sida barnaamijyadaan oo dhan, nuglaanta waa in aan horay loo soo sheegin oo waa in lagu cusbooneysiiyaa nooca ugu dambeeya ee Edge waqtiga rarka. Sababtoo ah barnaamijkani wuxuu dhameystirayaa barnaamijka abaalmarinta Google Chrome Vulnerability, warbixin kasta oo ka ciyaareysa Edge laakiin kuma eka Chrome sidoo kale wuxuu qiimeyn doonaa iyadoo lagu saleynayo darnaanta warbixinta, saameynta, iyo tayada.
Waa in halkan lagu xusaa in barnaamijka abaalmarinta cusubi uu la socon doono barnaamijyada abaalmarinta Edge ee jira oo abaalmarin gaadhaysa illaa $ 15,000 si loo helo nuglaanta nooca Microsoft Edge oo dhawaan laga tagi doono iyadoo lagu saleynayo mashiinka shirkadda EdgeHTML. Labada xaaladoodba, kaliya dayacanka dayac-tirka ee ugu dambeeyay ee la soo saaray ayaa si buuxda loogu dhejiyaa Windows (Win 10 / Win 7 SP1 / Win8.1) ama MacOS ayaa uqalmayaan abaalmarino.
Ka dib markii la tijaabiyo muuqaalka hore (kanaalada Canary iyo Soosaaraha) ee biraawsarka aaladda loo yaqaan ‘Chromium Edge browser’ ee bilihii la soo dhaafay, shirkadda waxay sii deysay nooca beta ee ugu horreeya ee furfuran ee toddobaadkan cusub. Waa la cusbooneysiin doonaa lixdii toddobaadba mar, taasoo macnaheedu yahay inay ka xasilloonaan badan tahay marka loo eego kanaalada maalinlaha ama toddobaadlaha ah. Tani waxaa laga heli karaa Windows iyo macOS, marka si dhakhso ah ayaad u xaqiijin kartaa.